DEG DEG:- Madaxweyne Farmaajo oo goordhaw gaaray degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Madaxweyne Farmaajo oo goordhaw gaaray degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa goordhow gaaray degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose, halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo oo ka kooban wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa degmada Afgooye kusoo dhaweeyay qaar ka mid ah mas’uuliyinta degmadaasi ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu kormeer ku taggo xeryaha ay ku jiraan ciidanka dowladda, sida xerada laanta buure ee gobolka Sh/hoose.
Ammaanka degmada Afgooye ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana la xiray waddooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo Afgooye, iyadoo aan la ogoleyn in halkaasi ay shacabka iyo gaadiidkaba maraan.
Waa safarkii ugu horeeyay uu madaxweyne Farmaajo ku tago degmada Afgooye, tan iyo markii xilka loo doortay 8-da bisha Febraayo ee 2017-ka.
Safarka madaxweyne Farmaajo ee degmada Afgooye ayaa kusoo beegmaya, xilli howlgal ay si wadajir ah gobolka Sh/hoose uga fulliyeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykan ah lagu dilay hoggaamiye ka tirsan Al-shabaab oo lagu magacaabi jiray Macalin Cismaan Cabdi Baadil iyo seddax ka mid ah illaaladiisa.
Wixii warkaan kusoo kordha dib kala soco Insha Allah.